Shenzhen Xinghongchang Electric Co., Ltd. e wuru na 1996, bụ ọkachamara na-emepụta ihe ọkụkụ dị na Huizhou. N'ihe karịrị afọ 22 ahụmahụ nke ịmepụta ihe ọkụkụ, anyị nwere ọpụrụiche n'ubi nke ihe ọkụkụ kpụ ọkụ n'ọnụ, na-ebute usoro ihe ọkụkụ dị ọhụrụ.
W ith anyị R & D otu na ọkachamara owuwu, anyị na-enwe ike Nlụpụta, mbupụ na ọkọnọ ahịa anyị na magburu onwe ya mma Far Infrared Heating Film.We ama certificated na BV, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.And Anyị ngwaahịa ama nwetara ihu ọma nke OA, RoHS, UL, MET, ETL, wdg.
Njirimara dị elu na nke asọmpi nke XHC ngwaahịa na-eme ka anyị bụrụ onye ha na ya na-enwe mmekọrịta nke ụwa ndị a ma ama, ndị dịka, Samsung, LG, Kohler, Panasonic, BROAN, wdg. Anyị dị 100% njikere na-adọrọ mmasị na-etolite na onye ọ bụla ahịa ọnụ.
Ụdị ahịa : Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company , Organization
Ọdịnayaahịa : Heating, Refrigeration & Temperature Control , Heating Element , Bath Mirror
Ngwaahịa / Ọrụ : Ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ , Igwe ihe mgbochi na-emetụta , Ihe mgbochi kpo oku infrared , Obere Ngwá Agha Na-ekpocha Ọkụ Infrared , Mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ , Enyo Defogger na-ekpo ọkụ
Isi ego (nde US $) : 100M RMB
Emezuru afọ : 1996
Akwụkwọ : CE , ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 , CB , EMC , FCC , FDA , PSE , RoHS , UL
Adreesị ụlọ ọrụ : No. 608, Huashang Intl Bldg, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Ahịa isi : Americas , Europe , Middle East , West Europe , Worldwide , Asia , East Europe , North Europe
Mba nke Production Production :5
Ebe obibi Ụlọ ọrụ :XHC Industrial Park,Huiyang,Huizhou City,China